Uma sizokuthenga isilwane, umbuzo wokugcina yisikhathi esingakanani esiluthatha isilwane sethu nathi. Isikhathi sokuphila kwamagagasi namuhla sicatshangwa ukuthi siyona ende kunazo zonke, kwabanye abantu isikhathi saso sifinyelela eminyakeni engu-150 noma ngaphezulu. Muva nje, ukuzilibazisa kokugcina amakhaya abo athandwa kakhulu.
Ukubukeka kwabo kuvelele ukuthi lezi zilwane ezinwabuzelayo azikwazi ukudideka nanoma ubani. Ukusuka kwezinye izilwane bahlukaniswa ngokuba khona kwegobolondo, ekhonza njengesihlobo sesihlangu, esivela engxenyeni engenhla yomzimba. I-carapace ithambo elimbozwe ngamacwecwe amacembe.
Umzimba we-turtle ukhulile kanye negobolondo, futhi umelela wonke owodwa nalo lonke uhlelo lwethambo. Igobolondo inikezwa ngezimbobo lapho isilwane singakwazi ukudweba kalula izitho zayo. Ukuma kwawo nesakhiwo sakhiwo kungaba okuhlukile futhi ikakhulukazi kunqunywa indawo yokuhlala. Isibonelo, izilwane ezinwabuzelayo zasolwandle zine-carapace ephathekayo, kuyilapho izihlobo zasemhlabeni zikhudlwana futhi zinomumo wokuthutha.
Zingaki izivunguvungu eziphilayo?
Umbuzo wokuthi ubuningi bezintambo zesikhathi sokuphila, luba lukhuni kangakanani uma bebalandeli abanomdlandla ukuqala izindlu zezilwane ezifuywayo. Impendulo isicacile: konke kuxhomeke ekunakekeleni okufanelekayo kwezilwane ezinwabuzelayo.
Namuhla kunezinhlobo zama-turtles ezingaba ngu-300 emhlabeni wonke, kuyilapho eRussia kunezinhlobo ezingu-7 kuphela. Izilwane zanoma yiluphi uhlobo ziqinile kakhulu futhi zihlala zihlala njalo. Unesandulela-ngculazi esihle, esiza ukunqoba izifo eziningi futhi kubangele ukuphulukiswa ngokushesha kokulimala.
Lezi zinambuzane ezinhle kakhulu azikhetheli ekudleni, zingahlala ngaphandle kokudla isikhathi eside, futhi uzizwe kahle.
Ukuphila kwama-turtles ezinhlobonhlobo ezihlukahlukene okuphila kuzohlukahluka komunye nomunye. Isibonelo, kukhona icala lapho isihluthulelo okuthiwa uMarion sineminyaka engu-152 ubudala futhi sisaphila. Ngaphansi kwezimo ezinhle, ikwazi ngokugcwele ukufinyelela eminyakeni engu-200 noma engu-300. Izivunguvungu ezinkulu eziphila isikhathi eside, ezihlala eziQhingini zaseGalapagos. Izingulube zamasayizi amakhulu zibhekwa njengezimbongolo eside phakathi kwaleli qembu lezilwane. Ngokusobala, lokhu kungenxa yokushintshwa okuncane kwezinto. Iningi lezinhlobo zezinhlanzi zingama-20-30 ubudala. Izinhlobo ezidumile ezibomvu, isibonelo, ziphila iminyaka engu-30 lapho zidala izimo ezinhle.
Kungani izingulube ziphila isikhathi eside kangaka?
Lesi silwane singakwazi ukuphatha isikhathi eside hhayi kuphela ngaphandle kokudla, kodwa futhi ngaphandle kwamanzi. Kukhona amacala lapho iziphupho zaziphathwa ngaphandle kokudla isikhathi eside, zilinganiselwe iminyaka eminingana. Iqiniso elimangalisayo lokuziphatha kwabo lalisungulwa isikhathi eside. Izingulube konke ukuphila kwabo okude kuhamba kancane kancane, kunesikhumba esibomvu. Ngenxa yalezi zizathu, kunzima kakhulu ukuphawula ukuguqulwa kweminyaka nokuguga. Okufanayo kusebenza ezingxenyeni zangaphakathi.
Sekuyisikhathi eside ososayensi befuna impendulo, lapho kuphila khona isikhathi sokuphila kwamagundane, befunda izici zabo zofuzo. Ukufa kwemvelo yalezi zilwane ezinwabuzelayo kuphelela kakhulu. Isizathu sokufa ngokuvamile siyisifo noma ukufa kwabantu abadliwayo kanye nabantu.
Uma lezi zimo zingekho, ukuphila kwezingulube kuzohlala isikhathi eside. Unesinye isici esimangalisayo - ukulawula ukushaya kwenhliziyo: ayeke okwesikhashana, bese uqala futhi. Lapho inhliziyo iyeka, i-turtle igxuma futhi ayihambeli nhlobo.
Izingulube ziyisikhathi eside sezulu
Ucwaningo lubonise ukuthi lezi zilwane eziphilayo zihlala emhlabeni iminyaka engaphezu kwezigidi ezimbili. Kukhona ukusola ukuthi bazi kahle izwe ngaphambi kwama-dinosaurs. Sekuyisikhathi eside izinhlanzi zingazange zenze izinguquko, njengokungathi izinguquko zokuziphendukela kwemvelo azizange zithinte.
Lokhu akuzange kwenzeke kunoma isiphi isilwane emhlabeni. Le mfanelo ivumelanisa nanoma yiziphi izimo zangaphandle futhi ichaza ukuphila okunjalo kwezingulube.
Ukuphila kwama-turtles asekhaya
Ubudala bezintambo zasendle zingadlula isikhathi sokuphila izikhathi eziningana ngaphansi kwezimo ezihle.
Uma sicabangela inkinga yokuphila kwesikhathi sezilwane ezifuywayo ezifuywayo, khona-ke izinkomba zizithoba kakhulu. Futhi namanje, uma kuqhathaniswa nezinye izilwane ezifuywayo, njengamakati nezinja, zihlala isikhathi eside kakhulu.
Amaphupho athandwayo ekhaya anesikhathi sokuphila okulandelayo:
I-red-eared - iminyaka engu-30;
I-European marsh - iminyaka engu-20-25;
I-Asia Ephakathi - iminyaka engu-20-30.
Uma ubheka lezi zinkomba, isiphetho sikhombisa ukuthi uma utshala i-tortle ekhaya, kufanele ulungele ukuhlala nayo ingxenye ebalulekile empilweni yakho futhi unikeze lo mlando omangalisayo onokuthula nokunakekelwa kahle.
Ubukhulu bezintambo zomhlaba
Ubungako bomhlaba obuthakathaka buyathinteka ngezindlela eziningi ngokubukeka kwayo. Isilwane esikhulu kunazo zonke yindlovu. Ngamanye ama-turtles amakhulu afinyelela kumamitha angu-1.8, futhi isisindo - ama-kilogremu angu-300. Akunakwenzeka ukugcina i-giant kangaka ekhaya.
Ama-turtles omhlaba, okunconywa ukuthi agcine indlu, ngokuvamile anebude obungamamitha angu-40. Lokhu kungenxa yendawo encane ephilayo kanye nokuhlala okulinganiselwe yokuhlala. Uma ihlala endaweni evulekile engavimbeli ukunyakaza, iqala ngokuningi kakhulu. Uma i-turtle, lapho ifinyelela usayizi othize, iyancipha ekukhuleni, kusho ukuthi iyancipha endaweni evulekile futhi, ngenxa yalokho, kunzima ukuhamba kuyo. Ukuze sikhule i-reptile inkulu kakhulu kunezihlobo zayo, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi indawo yakhe evulekile.
Izingulube ezinkulu ngobukhulu, ezihlala emanzini, ziyizikhukhula ezinkulu, zibizwa nangokuthi isikhumba. Babenegama labo ngenxa yegobolondo, ehlanganisa amathambo amancane amancane, axhunyiwe komunye nomunye, kodwa ahlukaniswe namasipha. Ngenxa yalolu sakhiwo, i-turtle ayikwazi ukudweba nokufihla ikhanda ngaphakathi.
Ubude bezilwane ezinwabuzelayo bufinyelela kumamitha amabili nengxenye, nesisindo - cishe ngamakhilogremu angamakhulu ayisithupha. Bayizakhamuzi zanoma yiluphi olwandle oluseningizimu olufudumele. Naphezu kokuthi kunezinhlanzi ezinjalo ezweni, zingabonakala zingavamile kakhulu.
Ngenxa yokuqapha, izakhamuzi zasolwandle ezinesikhumba ziyasondela eduze nolwandle futhi zihambe olwandle kuphela ebusuku, lapho ezweni kukhona izingozi ezimbalwa.
Ukudla okunamandla kulawa maqhuqhuva kukhona ama-mollusks, kanye nezinhlanzi ezincane, ama-crustaceans, i-jellyfish, i-scallops. Inyama yezilwane ezinezilwane ezinwabuzelayo kulezi zinhlobo zifanelekile ukudla, naphezu kokuthi kunezimo zobuthi ezinobuthi obuqukethwe kuwo. Ukuze uthole i-turtle, i-toxins engena emzimbeni ngokudla ayifaki ingozi, kodwa kumuntu onjalo inyama iyingozi.
Phakathi kwabakhileyo eziduduzayo zasolwandle , lokho okubizwa ngokuthi okuhlaza kuyabhekwa njengekhulu. Babuye kuthiwa isobho. Indawo yokuhlala yalezi zilwane yizindawo ezingaphansi komhlaba nezindawo ezishisayo zasolwandle. Ngokwesayizi ubude bafinyelela amamitha owodwa nengxenye, futhi isisindo siseduze namapounds angamakhulu amabili. Kukhona abantu abangashadile abanesisindo sehhafu, futhi ubude bufinyelela kumamitha amabili.
I-tortle enezinwele ezibomvu - inketho enhle kulabo abangazange bahlolwe ngaphambili
Isilwane esinjalo siqinile futhi singajwayela izindawo ezihlukene. Noma kunjalo, umnikazi udinga imali nesikhathi sokusekela umngane onjalo impilo enhle. Ngokuvamile, isibhubhu esinomvu obomvu sikhuthazelela ngokugcwele ukuhlangana komuntu nomuntu, naphezu kokwesaba kwawo endle. Kusukela ekudleni, izilwane ezifuywayo ezifuywayo zikhetha ukudla okukhethekile. Umjikelezo wokuphila kwalolu hlobo lwezilwane eziyinkimbinkimbi kusukela eminyakeni engu-50 kuya ku-70.
Uma ubheka ngokujulile isilwane othanda ukuhlala ngasohlangothini oluhlangene impilo ede futhi ejabulisayo - ngokuqinisekile, ngokuqinisekile ngeke kube ukuthengwa kwe-tortle.
Mzy kuyinto ichibi e-Abkhazia. Incazelo ye-reservoir, izici zayo, indawo kanye namaqiniso athakazelisayo
I-Cancer (isilwane): isakhiwo nendawo yokuhlala
Isipho sefulethi: silungiselela kahle
Kungani iphupho mayelana amazinyo akho ayeka ngaphandle kwegazi noma wakhe?
Domokomplekta kwe-SIP-panel kusuka umkhiqizi: incazelo, izici, amanani
Izindaba Early AP Theatre: izici izingoma nezindlela ezihlekisayo
Tablets "Lindinet 30": Izibuyekezo gynecologists